Mustaqbalka Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya “Hargeisa ma Noqon kartaa Caasimada Soomaliya ? (Sawirro + Xog) – Xeernews24
Mustaqbalka Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya “Hargeisa ma Noqon kartaa Caasimada Soomaliya ? (Sawirro + Xog)
Bishii May Sanadii 1998-dii ayaa ilaahay ha u naxartee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu safar ugu baxay dalka Itoobiya, markii uu soo noqday ayuu shir Jaraa’id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa wuxuuna yidhi “ Waxay nagu yidhaahdeen waxaan Ictiraaf ahayn waxba idiin kala hadhimayno”.
Xilligaas xilli ka horeeyey sida uu buugiisa ku qoray Geesood wuxuu sheegay in madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax mar uu la kulmay Cigaal isna uu goob joog ka ahaa in Cigaal loo soo badhigay in uu ku dhawaaqo in uu isagu yahay madaxweynaha Soomaaliya Caasimaduna si ku meel gaadh ah u tahay Hargeysa, wuxuuna Cali Cabdalla Saalax sheegay in uu ka shaqaynayo si xukuumadaas Soomaaliyeed ee Hargeysa xarunta u tahay loo aqooonsan lahaa.
1997kii Cigaal ilaahay hawnaxariistee wuxuu soo jeediyey in shir dib u heshiisiin ah Soomaali loogu qabto Hargeysa hasa yeeshee waa laga diiday, waana ta keentay in Dastuurkii 2001 “Somaliland” loogu daray in qofkii Muqdisho tagaa danbiile yahay, wax wadahal ahna aan lala gali karin Muqdisho, waxaase arrinta wadahadal in la gali karo mar danbe golaha wakiilada “Somaliland” ka ansixiyey Siinlaayo.
Waxaa muddo dheer oo ku siman 27 sanno markasta la dayacayey fursado ay yar tahay siday u soo noqdaan, waxaa hadda muuqata fusad wanaagsan oo ah tii 1997kii oo kale taas oo ah in Hargeysa mar kale haysato in ay noqon karto caasimadda Soomaaliya ee ku meel gaarka ah xaaladaha maanta jira awgood, hawlo badan oo aan qaabkan qoor qabatinka aan ku suurta galayna ayba suurta galtahay in ay hirgalaan.
Waa arrin wanaagsan in nabadda laga shaqeeyo hasa yeeshee way adag tahay in caalamku ku godlado doorashooyin aan ku soo askunmin tirakoob sharciyeysan , aderis ama cinwaan qofku leeyahay iyo Warqad aqoonsi oo tixraac leh, waxkasta oo la qabto waxaa lagu salaynayaa miisaanka sharciyadda adduunka iyada oo aynu aragno Catalonia iyo Kurdistan oo dhinac walba u oofiyey shuruudihii doorashadooda iyo aftidoodaba aanu caalamku dhag u jalaqsiin.
Waa mar kale iyo xaaladda ka taagan Muqdisho oo maanta haday Hargeysa ku dhawaaqdo in ay ogoshahay in ay caasimad ku meel gaadh ah noqoto inta Soomaali ka degayso 20ka Sanno ee soo socda, waxay ila tahay Hargeysa oo Caasimadda Soomaaliya noqotaa in ay ka dhawdahay aqoonsi 27 sanno albaabkasta loo garaacay oo aan wax rajo ahi ka soo socon wadadii lagu heli lahaana loo marin.
W/Q: Asad Cadaani Ibraahim
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Maan.jpg 478 768 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-05 19:43:552017-11-05 19:43:55Mustaqbalka Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya “Hargeisa ma Noqon kartaa Caasimada Soomaliya ? (Sawirro + Xog)
Tareenka cusub ma waxaa dib loogu Ceshay Magacii Sannadkii 1897-kii? Daawo Amiir reer Alla Sucuud ah oo shil Diyaaradeed ku dhintay